စျေးကွက်နှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ |တရုတ်ဈေးကွက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
JGNE Electric Passenger Driven Storage Forklift 25.6V 150AH 25.6V 450AH Lithium ဘက်ထရီ
ရိုးရာအလုံပိတ်ခဲအက်ဆစ် (SLA) ဘက်ထရီများသည် မျိုးဆက်ဟောင်းနည်းပညာမှဖြစ်သည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပါဝါဖြေရှင်းနည်းများကို တီထွင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလာပါသည်။ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန်အတွက် LiFePO4 ဘက်ထရီများကို အားပြန်သွင်းနိုင်သော ပါဝါစွမ်းအင်မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။RPE ဘက်ထရီများသည် သာလွန်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပါဝါရွေးချယ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနည်းပညာ၏ ရှေ့တန်းမှဖြစ်သည်။
လက်ကားပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီအား တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော LiFePO4 လီသီယမ်ဘက်ထရီ 25.6V 300Ah ဖြင့် သယ်ယူရ
JGNE ၏ Lithium Iron Phosphate စမတ်ဘက်ထရီအသစ်သည် ဆေးဘက်ထရီတွန်းလှည်းများ၊ ပေးပို့စက်ရုပ်များနှင့် UPS စနစ်များအပါအဝင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး စာရေးကိရိယာအမျိုးမျိုးတွင် ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည်။
Deep Cycle အားပြန်သွင်းနိုင်သော 25.6V 120Ah Lithium Iron Phospahate LiFePO4 ဘက်ထရီအထုပ်အတွက် Forklifts 24V 120Ah
တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်း၊ မြင့်မားသောယုံကြည်မှု၊ ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှုတို့သည် ဤထုတ်ကုန်၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးဖြစ်သည်။
စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု အတွက် လျှပ်စစ် forklift နှင့် AGV။
2.High specific energy, high cost performance;
4. မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ၊ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နည်း။
5.Excellent rate discharge စွမ်းဆောင်ရည်
6. ကွဲပြားသော ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်များအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြေရှင်းချက်ပေးသည်။
အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက်၊ Forklift ဂေါက်တွန်းလှည်းများ၊ UPS ဘက်ထရီများနှင့် ရွက်လှေများ
ကြီးမားသောပါဝါ 12.8V 21Ah LiFePO4 လျှပ်စစ်ဂေါက်တွန်းလှည်း Lithium ဘက်ထရီ 26650 3000mah Single cell 4S7P
1. အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဆဲလ်- သန့်ရှင်းသောစံ A 26650 4000mah ဘက်ထရီဆဲလ်များ၊ ဆဲလ်များ၏ cyle သက်တမ်းသည် အဆ 2500 ရှိပြီး ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းမှာ 3C ဖြစ်သည်။
2. အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီသော စံသတ်မှတ်ချက်များ- ကိုက်ညီသော စံနှုန်းများမှာ 5mV , 3mΩ,20mAh အထိ နိမ့်ပါသည်။
High Amp 18650/26650 ဘက်ထရီ Original NCM/LFP အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ
မော်ဒူလာဘက်ထရီသည် စွမ်းရည် သို့မဟုတ် ဗို့အားတိုးမြှင့်ရန်အတွက် ပြင်ပ သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း module များအကြား စီးရီး သို့မဟုတ် အပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် သီးခြား modules များအဖြစ် ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်စုကို အသုံးပြုခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။module တစ်ခုစီတွင် BUILT-IN BMS ရှိသည်။
လက်ကားရောင်းချသောတရုတ် 12v 12.8V လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်း lifepo4 ဘက်ထရီထုပ်
အရန် ပါဝါထောက်ပံ့မှု- အနှောင့်အယှက်မဲ့ ပါဝါ UPS၊ ဆက်သွယ်ရေး အခြေစိုက်စခန်းနှင့် အချက်ပေးကိရိယာများသည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးသည့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအဖြစ် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီကို အသုံးပြုပါသည်။ဤဘက်ထရီများသည် စက်ဝိုင်းများကို တန်ဖိုးထားပြီး ကြာကြာခံလေလေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
12.8V 12Ah Lithium Ion Long Life Cycle Lifepo4 ဘက်ထရီ အားပြန်သွင်းနိုင်သော Lithium Ion ဘက်ထရီ 12V အားသွင်းကိရိယာ
လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် လက်ရှိတွင် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီထက် 1-2 ဆ ပိုများသော်လည်း၊ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ 5000 လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတွင် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ၏ 1/3 သာရှိသည်။ရေရှည်စီးပွားရေးအကျိုးအတွက် ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်မှာ နည်းပါးသည်။
BMS ဖြင့် 12v 12.8v 100ah LiFePO4 SLA အစားထိုးဘက်ထရီအထုပ်
တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်း၊ SLA ဘက်ထရီ 10 ဆ
သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသော၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်သောပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ မြင့်မားသောပါဝါအထွက်။
အားပြန်သွင်းနိုင်သော SLA အစားထိုးဘက်ထရီ 12.8 v 28.8mAh LiFePO4 BMS ပါရှိသော လီသီယမ်အိုင်ယွန်းဘက်ထရီ
အားပြန်သွင်းနိုင်သော SLA အစားထိုး ဘက်ထရီ 12.8 v 25.6mAh LiFePO4 BMS ပါရှိသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ
ထုတ်ကုန်သည် စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်အရ ပုံမှန်အလုံပိတ်ခဲအက်ဆစ် (SLA) ဘက်ထရီများကို စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်သော Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ဘက်ထရီဖြစ်သည်။
ထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း၊ ဗို့အားသည် မတည်မြဲပါ။
ဘက်ထရီအားဆက်လက်အားသွင်းထားရန် trickle charging ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
တူညီသော စွမ်းအင်ပမာဏအတွက် သိသိသာသာ အလေးချိန်နည်းသော ဘက်ထရီသည် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဓာတ်ငွေ့ထွက်မလာဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်အကွာအဝေးထက် အမည်ခံဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းသည်